30 May 2017 | मंगलबार, १६ जेष्ठ, २०७४ | Edition : Nepal |
नेपाललाई प्रजातन्त्र फाप्दैन केही वर्ष यता काठमाडौंका गफअड्डातिर अनि पुराना संस्थापनका मानिसहरुबीच अक्सर एक खाले चर्चा सुनिने गरिएको छ–‘नेपाललाई प्रजातन्त्र फाप्दैन ।’ विस्तृतमा...
बिचार ट्रेण्डिङ्ग प्रचण्ड ज्यू, चितवनको माया मार्नुस् !अमेरिकी कार्यकारीको पहिलो विदेश भ्रमणः घुमाउरो रेखामा शान्तिको खोजी
प्रचण्ड ज्यू, चितवनको माया मार्नुस् !
काठमाडौं, जेठ १५ । चितवन त्यही जिल्ला हो, जहाँ माओवादीले युद्धकालमा ‘माडी नरसंहार’ गरायो । जो प्रचण्डले पछि माफी मागिसके । शक्तिखोर पनि चितवनमै हो । जहाँ माओवादी योद्धाहरुको आँशुको इतिहास गढेको छ । माओवादी आन्दोलन र राजनीतिसँग चितवन जिल्लाको यस्तै अप्रिय सम्बन्ध गाँसिए ।
अमेरिकी कार्यकारीको पहिलो विदेश भ्रमणः घुमाउरो रेखामा शान्तिको खोजी
काठमाडौँ, १३ जेठ । निर्वाचन अभियानदेखि राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दासम्म मुसलमान समुदायप्रति आक्रामक देखिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण सुरु गर्नुभयो ।
रेणुको चर्चाः प्रचण्डपुत्री भएर मात्रै हो त ?
विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा मदन भण्डारीको नाम जोडिएकै हो । तर, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा कसैले पनि दुर्गा सुवेदीको श्रीमती भनेर हेरेनन् ।
नबिर्सिनुहोस् लाहुरेको योगदानलाई नेपालीहरु विदेशीने परम्पराको सायद जेठो ईतिहास हुन सक्छ, लाहुरेहरुको ईतिहास । यो ईतिहास स्वईच्छाले जन्मिएको हैन, राज्य सत्ताले जन्माएको हो । यस्तो ईतिहास र घट्ना संसारमा नहुन सक्छ ।
तपाईंलाई किन भोट दिने नेता ज्यू ? यी १५ प्रश्नको जवाफ छ ?
कुनै गलत व्यक्तिलाई मतदान गरेर जिताउनु भन्दा मतदानै नगर्नु धेरै बुद्धिमानी हुनेछ । कसैलाई मत नहाल्न अधिकार भए पनि उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्सन’ गर्ने अधिकार छैन । वा भनौं, संविधानतः नो भोटको व्यवस्था छैन ।
चुनावी भाषण: खोलो नहुने गाउँमा पूल, मान्छे नबस्ने ठाउँमा रेल ! काठमाडौं, वैशाख २५ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको बेला लमजुङको एक गाउँमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेता पार्टीको आमसभामा बोल्न पुगेका थिए । आमसभामा जानुअघि ति नेताले लमजुङे कार्यकर्तालाई काठमाडौंमै भेटेर सोधेका थिए, ‘लमजुङका जनताका लागि कस्तो कुरा बोल्नुपर्छ ?’
रञ्जु बहिनी ! तरकारीवाली बनाउलान् है !
हामीकहाँ मेयर हुनको लागि उमेरले पाँच, छ दशक पार गरेको, दाह्री कपाल फुलेर सेतै भएको, दुईचारवटा मुद्धा मामलमा जेलनेल भोगेको, गुण्डागर्दीको आडमा रजाइँ गरेको, गाँठ जति पनि खर्च गर्न सक्ने, रक्सी, चिया र चुरोटमा मतदाता किन्न सक्ने हैसियत भएको, गाला चाउरिएको, रोगले थलिएको, अनुभवी र खारिएको व्यक्ति नै चाहिने चलन जस्तै हो ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले उब्जाएको १४ प्रश्न
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय चुनावी घोषणापत्र मार्फत विगत २५ वर्षमा भएका सवै राम्रा कामाहरुको जस एक्लैले लिने प्रयास गरेको छ । २०४७ साल यता अधिकांश समय कांग्रेसले नै शासन गरेको पनि हो ।
‘भाले’ एमाले, अरु झाले–माले !
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यसरी अस्थिर बन्दैगयो की, यही टिप्पणी लेखिरहँदा सायद अर्को अप्रिय निर्णय पनि हुनसक्ला ।
अमेरिका पुगेका पत्रकार प्रेम बानियाँको चिन्ताः नेताहरुले स्वाभिमानको किड्नी बेचेर टोपी लगाए
सयौं सुशीला कार्कीहरुलाई यसैगरी डाम्नेछन् यिनीहरुले । जो वर्षौवर्षदेखि डामिएकै थिए। यस्ता कयौं नवराज सिलवालहरुलाई बलिको बोको बनाउँदै (कत्लेआम) गरेको राजनीति हो यो ।
न्यूज अपडेट१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट, राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, पूँजीगत तीन खर्ब ३५ अर्बडाक्टर गोविन्द केसी दाङमा अनसन नबस्नेराष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कति बजेट ? कहाँ कहाँ विनियाेजन भयाे ठूलाे बजेट ?रक्सी चुरोटको मुल्य बढ्याेबजेट २०७४/७५ः हरेक गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंक, हरेक नेपालीकाे बैंक खाता वृद्धहरुले धेरै औषधि प्रयोग गर्दा हुन्छ यस्तो असरअब देशैभरी २० वर्ष पुराना सवारीसाधन चलाउन नपाईनेनयाँ शक्तिका पूर्व नेता रिमालले मागे डा. भट्टराईको राजीनामाअब कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक सुरुङ मार्ग बन्ने
प्रेम र यौन लुकी–लुकी मोबाइलमा पोर्न भिडियो हेर्छन् महिलाकाठमाडौं । मोबाइलबाट पोर्न भिडियो हेर्नेमा महिलाहरु पुरुषभन्दा निकै अघि देखिएका छन् ।
जीवनशैली वृद्धहरुले धेरै औषधि प्रयोग गर्दा हुन्छ यस्तो असरएजेन्सी–वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले दैनिक ५ वटाभन्दा बढी औषधिको चक्की लिनुले वृद्धहरुलाई झन् कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार बढ्दो उमेरका साथै अधिक औषधि सेवनले कार्य गर्ने क्षमतामा प्रभावित पार्छ ।
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा महँगा विश्वविद्यालयसुरुवातमै नै पत्ता लगाउन सकिन्छ क्यानसर, यस्ता रोगहरुले दिन्छ संकेत
विचित्र विश्व यो हो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो भान्छाएजेन्सी–विश्वको सबैभन्दा ठुलो भान्छा कहाँ रहेको छ ? सायद यसबारे कमै मानिसहरुले ध्यान दिने गर्छन् । तर भारतमा यस्ता धेरै ठुला भान्छाहरु रहेका छन् जसमा दिनहुँ लाखौ मानिसहरुले भोजन गर्ने गर्छन् ।
विचित्र विचित्रका विवाहः कसैले कोब्रा सर्पसँग त कसैले आइफल टावरसँग गरे विवाहयस्ता आचरण भएका व्यक्तिले धेरै सेक्स गर्छन् विवाह गर्न आतुर छन् यी युुवतीहरु, तर यस्तो छ सर्त